Ny 'stenier iklim' stigma 'dia mifamatotra amin'ny teha-tsikombakomba, fitsangantsanganana ankavanana sy fahatsapana hozatra: Martin Vrijland
Ny 'steniôma' deniers 'toetrandro dia mifamatotra amin'ny teha-tsikombakomba na mpitsikilo, havanana amin'ny lafiny havanana ary fahatsapana hozatra
Filed in Fikomiana mihintsy, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 1 Oktobra 2019	• 15 Comments
Ny tantara 'fanafana' eran-tany dia lalao vita tsara izay misy ny politika, ny haino aman-jery ary ny olo-malaza manana andraikitra lehibe. Tsy azo lavina fa ny fampahalalam-baovao sy ny politika dia nampifandray ny hetsika ara-politika havanana amin'ny 'deniers' (deniers) sy ireo mpanohana ny teôlôjika. Antsoinay hoe 'fananganana marika' na 'marenitra' ity asa ity. Ity dia paikady ara-barotra izay milalao tsara sy manerantany.
Ny Kanan (Anglisy: 'elatra ankavanana') dia navela hitombo ary nanohana ary ny 'elatra ankavanana' dia tsy maintsy nampifandraisina tamin'ny stigmas vitsivitsy miverimberina. Ny vondrona 'elatra ankavanana' dia manjary: nasionalista (manohitra ny fanatontoloana), vehivavy tsy tia namana, tsy misalasala, mandà ny fiakaran'ny hafanana manerantany ("deniers") ary mifikitra amin'ny teoria-mpiray tsikombakomba. Ity farany dia tratra tamin'ny alàlan'ny fitomboan'ny haino aman-jery hafa toa an'i Infowars (Alex Jones), David Icke ary tao amin'ny Holandey toa an'i Thierry Baudet sy Robert Jensen. Ireo haino aman-jery hafa ireo dia navadibadika ho tranonkala firaisana tsikombakomba ary tamin'ny alàlan'ny famelana azy ireo hanokatra malalaka sy fanohanan'ny fanatics ny fanindrahindram-pirenena sy ny anti-globalism ary ny fizotry ny Brexit, dia vitanao ny nanamboarana tamim-pitandremana ilay marika ankavanana iraisam-pirenena. Ny hany zavatra tokony hataonao dia ny fipoahana an'io marika io, ohatra, krizy ara-toekarena ary karamao daholo izay rehetra mifandray amin'io marika io.
Amin'ny alàlan'i Greta Thunberg sy ireo karazana fankalazana rehetra dia milalao ny fahatsapana an-tsokosoko ankehitriny ny vahoaka. Ny ankamaroan'ny olona dia kamo loatra, na sahirana loatra amin'ny 'vondrona mieritreritra' handinika fandaharana toy ny eto ambany. "Mijere sarimihetsika mandritra ny adiny roa? Tsy manao an'izany aho. Afaka mamofona ny rehetra fa simba ny tontolo iainana ary manafana ny tany". Tsy misy olona afaka mandà fa rava ny tontolo, ohatra, ny plastika ao anaty rano, fa ny stigma 'denier' dia miraikitra amin'ny zava-drehetra ary izay rehetra mikorontana dia hijery lavitra an'izay tarehin'ny fampahalalam-baovao mahazatra. Na izany aza, maro no tsy mahatsapa (na tsy takatra tsotra izao) fa ny media dia mety hamokatra fampielezan-kevitra na manodinkodina zavatra hitarika an'izao tontolo izao amin'ny fihoaram-bola (an'ny olon-tsotra) ary rafitra fitantanana manerantany .
Ny hevitra hoe tokony hanao politika dia tsy miraharaha ny fisian'ny politika mamatsy vola ny ankabeazan'ireo indostria lehibe. Ny indostria izay mpamorona sy mpamokatra ireny plastika rehetra any amin'ny ranomasina ireny, ohatra. Na izany aza, tsy tokony hafangaro isika. Mifantoka amin'ny CO2 amin'ny rivotra sy ny fiakaran'ny hafanana maneran-tany ny fifantohana amin'ny fampidirana maneran-tany fanampiny. Toa misy ny olana eran'izao tontolo izao haparitaka amin'ny alàlan'ny vahaolana iray izay manome fifehezana sy fifehezana bebe kokoa amin'ny vahoaka. Toa izany no tanjona miafina.
Na izany aza, ny fihatsarana ihany dia mety hitranga raha miharatsy ny toe-javatra. Ny fikorontanana kognitif dia miseho rehefa manondro amin'ny olona izay tsy maintsy fantarintsika aloha hoe tena misy tokoa ny fahasimban'ny toetr'andro. Ny olona dia efa mifikitra amin'izany rafi-pinoana izany. Izy ity dia karazana 'fisainan'ny vondrona' na fandavana ny haka ny olana hianarana azy io. Raha vao ekena dia sarotra ny hialana. Izany dia manakana ny olona maro tsy hijery akaiky ny famelabelarana toy ny etsy ambany. Manapa-kevitra izahay fa raha mandefa ity lahatsoratra ity ho an'ny namana ianao dia tsy hanaiky ny famelabelarana ary hampihemotra ny sorokao ianao ary hiantso anao hoe "iklim denier" na "mpikirakira tsikombakomba"? Azo oharina amin'izay hitanao tao amin'ny fiangonana taloha. Nahatsapa izay nolazain'ilay pasitera fotsiny ny olona, ​​satria nandalina izany. Ny fanompoana dia manompo ny olona sy ny rafi-pinoany. Izay rehetra miala amin'ny rafi-pinoana dia maneso miaraka amin'ny stigma resahin'io fiangonana io. (Jereo ilay famelabelarana ary vakio bebe kokoa eo ambanin'ny horonantsary).
Ireo olona ireo dia mety tsy hahita ny fampisehoana etsy ambony. Mety hisy fiantraikany amin'ny rafi-pinoany nekena izany ary tsy maniry izany ianao. Ao amin'ny psikolojika, io trangan-javatra io dia antsoina hoe "disponence kognitif." Mandritra izany fotoana izany, ny rafi-pinoana dia nohamafisina tamin'ny lalao ara-pihetseham-po farany tamin'ny alàlan'i Greta Thunberg. Ilay tovovavy izay tsy miady hevitra, fa milentika ny fihetseham-pon'ny mpihaino noho ny fahatsapana ny tatatra (satria tsy zava-misy izy ireo) fa ny toetrandro dia mihena hatrany ny karazan-javamaniry biby ary tsy hanana ny ho avy intsony ny tanora. Tena mora koa izany manodinkodina isa, toa an'i David Icke in ity fampisehoana ity manazava tsara. Saingy ny zava-misy ankehitriny izay efa nametra ny rafi-pinoany momba ny 'fiovan'ny toetr'andro' dia tsy hijery ary tsy hijery ireo famelabelarana toy izany. Tsy te ho sahiran-tsaina amin'ireto zava-misy vendrana ireto ianao fa mba hifikitra fotsiny amin'ilay fihetseham-po hoe mila misy miova. Raha tsy nahita fiovàna ireo olona ireo ihany, 10 taona taty aoriana, nefa manana an'arivony euros latsaka kely isan-taona ary afaka nalaina ny fahalalahana, dia angamba ho tonga aloha ny zava-nisy, nefa ho tara izany.
Ny zava-misy fa ny tena filalaovana ara-pihetseham-po dia tsy maninona ho an'ireo olona voakasiky ny rafi-pinoan'izy ireo 'ny fiakaran'ny hafanana' na ny fiovaovan'ny toetr'andro. Na tsy izany aza raha nanondro fa i Sir David Attenborough sy ny ekipany mpamorona sarimihetsika dia nampihatra fitaka sy fitaka mazava tao amin'ny andian-tsary Netflix 'The Planet'. Raha mandainga ny andiany 1, dia mety manontany tena ianao hoe hatraiza no namboarina miaraka amina sary diso. Na izany na tsy izany dia hita mazava fa ny tantaran'ireo walruses niongana teo amin'ny hantsana vokatry ny ranomandry tsy hita dia lainga mazava ho azy. Raha atoranao amin'ireo olona miantso anao hoe "iklim denier" na "mpikirakira tsikombakomba" ity lahatsoratra ity, "dia mety hitsoaka indray izy ireo na hamaky ny fialantsasatra tsy fahita nataon'ny Attenborough sy Netflix aorian'io. Ny asan'ny 'fandinihana ny zava-misy' dia miharihary ho zavatra iray izay vehivavy antitra ihany - tsy tia namana, havanana, nasionalista, olona misaina tsikombakomba dia raiso. Ankoatra izany, ny fandinihana ny zava-misy ankehitriny dia zavatra iray ataon'ny haino aman-jery sy ny manampahaizana Facebook. Ilay mpiandry izay nozahana ny sakafony. Nahavita asa tena tsara ny fandaharana nomen'ny haino aman-jery mitovy!
Tsy resaka zava-misy intsony izany fa momba ny fiction amin'ny alàlan'ny fampielezankevitra, mampiasa mpisehatra fanta-daza izay milalao indray amin'ny fahatsapana ny tatatra. Ny sarin'i Harrison Ford avy amin'ny sehatry ny sarimihetsika dia ampiasaina izao hilalao ny lalao azo itokisana. Izy vao haingana dia nampiasa ny fahitana ny Amazon ho toy ny booster emo vaovao vaovao amin'ny kabary izay tsy nanoratra ny tenany. Mazava ho azy fa mpilalao afaka milalao ny fihetseham-po! Mpilalao mihetsika ho an'izany izy. Fantatsika rehetra fa tena ilaina ny Amazon noho ny fidiran'ny CO2 (saingy maro kokoa ny CO2 dia mampitombo ny Amazon), noho ny maha samihafa azy ary ny rivotra iainana. Harrison Ford dia tsy mila milaza izany amintsika. Ny zavatra hafa rehetra lazain'i Ford dia tsy inona fa Neuro Linguistic Programming an'ny mpihaino miaraka amin'ny sary fa ny Amazon "mihoatra noho ny taloha ' may ny fandoroana. Tian'i Ford ho tsapanao ny maha izy azy rehefa mirehitra anaty efitrano iray ny efitrano ao an-tranonao ary milalao ilay mihaino azy izy. Nasongadiny ny sary hoe 'tany' ny tranonay ary ny 1 dia 12. Na izany aza, raha mamaky sy mijery ny horonan-tsary eto ambany faran'ity lahatsoratra ity ianao dia ho hitanao fa nilalao indray ny vahoaka tamin'ny sary sandoka amin'ny alàlan'ny haino aman-jery propagandista. Amin'ny zaza dia fantatsika fa tsy misy amin'ny fotoana fohy i Sinterklaas, nefa mbola te-hitandrina foana isika.
Tsy miteny izy fa ny kabary Harrison Ford momba ny Amazon dia mbola andrana iray hafa hampisaraka ny 'elatra ankavanana' an'ny blackjack amin'ny zavatra iray izay mifototra amin'ny fivavahan-diso. Ny mampifandray ny fisaintsainana tsikera amin'ny zavatra iray manana marika marigadra (izay hofoanana tsy ho ela izany, ka izay no mahameloka azy ireo). Ford dia mpilalao ary mpikarakara no nokaramaina sy karama amin'ny andraikiny.
Ny Amazon dia tsy nahalala afo intsony tao 2019 fa tamin'ny taona lasa ary ny daty fitaovana hita maso dia efa voatondro. Fa ny fanontaniana dia hoe te hitondra ny olana indray ve ianao raha tsindrio ity horonantsary ity sa hihemotra amin'ny stigma fotsiny ianao "Eny, tsy maintsy ho teôma iray mpitambatra hafa izany". Raha fintinina: ny fanontaniana dia raha toa ianao ka efa niharan'ny fandaharana maimaim-poana (fantatra ihany koa amin'ny hoe 'propagandie') ary ianao dia mitady fanamelohana. Tsy sahy manontany tena amin'ny tenanao ve ianao na te hifikitra amin'ny rafi-pinoanao ve? Ianao dia lasa ampahan'ny polarization vita tsara eo amin'ny fiaraha-monina ary ny polarisezation dia miteraka foana (toy ny tsipika miendrika «mini» sy bateria). Azonao atao angamba ny mamantatra hoe aiza ny lalana mikoriana. Soso-kevitra: Harrison Ford dia iray tamin'ireo mpandahateny tamin'ny 'World Government Summit'. Izahay dia efa vavolombelon'ny vanim-potoana efa lehibe: Mizara sy manjaka.
Ny mpitsikera Greta Thunberg dia mpivadika ara-pitondran-tena amin'ny tsy firaisana ara-pitondran-tena amin'ny tsy firaisana ara-pitondran-tena: famarana ny antony
Ny lahateny nataon'ny Greta Thunberg UN dia mampahatsiahy ny lahatenin'ny "zazakely nariana tamin'ny incubator" tamin'ny ady tany Irak
Tags: ny, miova. denier, toetr'andro, niray tetika, pananahana, deniers, Featured, navitrany, maneran-, Harisson Ford, toetr'andro, fiovan'ny toetr'andro, deniers, fandavana, ara-politika, marina, elatra havanana, amin'izao fotoana izao, fiakaran'ny maripanan'ny
1 Oktobra 2019 ao amin'ny 13: 46
Fotoana tokony hiresahantsika momba ny tena loza lehibe raha tokony amin'ity karazana klioba na psyops ity. Ny tsy hitantsika eo no ho eo, dia angamba ny loza lehibe indrindra ateraky ny olona sy ny natiora. Loza ekolojika no miandry antsika raha tsy mandray zavatra avy hatrany.
1 Oktobra 2019 ao amin'ny 16: 48
izy io dia manazava ny fihenan'ny mponina any Angletera
1 Oktobra 2019 ao amin'ny 17: 03
Ratsy loatra ka tsy mijanona amin'ny lohahevitra ianao
Moa ve isika miresaka momba ny tena loza? araka ny filazanao. Minoa fa io lahatsoratra nosoratan'i Heer Vrijland io dia iray amin'ireo lahatsoratra manan-danja indrindra amin'izao fotoana izao, fa ankoatra izany.
Raha mandinika bebe kokoa ny tranokalany ianao dia efa niresaka momba ny tsy fatiantoka an'ny 5G ny mpanoratra, jereo ity rohy ity, mety tsy ho azoazanao izany mister ex (PORVH :) azonao atao, eto indray:
1 Oktobra 2019 ao amin'ny 17: 53
Inona no porvh ?! Eto an-tampony satria ny mpanao majika dia manelingelina ny vahoaka amin'ny olana momba ny toetr'andro ary ny ekolojia mitovy aza dia tratran'ny fitaovam-piadiana matetika. Tsy misy maharatsy ity lahatsoratra ity ..
1 Oktobra 2019 ao amin'ny 18: 12
Miasa foana izy io mba hanelingelina ny olona amin'ny lohahevitra iray hafa, hany ka tsy ela ny fanadinoana ny maha-zava-dehibe azy.
Tena ilaina ny mahita hoe atao ahoana ny olombelona.
1 Oktobra 2019 ao amin'ny 19: 41
povrh dia mpaneho hevitra teo aloha, noheverinao fa ianao dia tsy toy izany, koa tsy ilaina.
Ny lahatsoratra etsy ambony avy amin'i Heer Vrijland dia manan-danja ho an'ny fisehoan-javatra ankehitriny, satria manasongadina ny toerana itoriantsika azy dia fampitandremana lehibe izany.
Ary mazava ho azy fa zava-dehibe ihany koa ny lafin-javatra misy anao fa fitaovana ho an'ny hery fotsiny ihany
propaganda (tena zava-dehibe koa)
1 Oktobra 2019 ao amin'ny 20: 34
Eny tsy azo tsarovana intsony, satria mitombo ny fifehezana ny saina amin'ny andro ary avy eo ao anaty rahona ny herintsika.
Ary 5G sy Elon Musk Neuraling eo amin'ny atidoha-solosaina dia manana anjara toerana lehibe ao.
1 Oktobra 2019 ao amin'ny 13: 59
Mandritra izany fotoana izany dia mandeha amin'ny finday finday 4G / 5G finday daholo ireo mpianatra ireo
1 Oktobra 2019 ao amin'ny 18: 49
Toy ny tsunami, dia miverina hatrany amin'ny tsirairay ny hafatra,
ONU, mikosoka, manindrona ary ho tanterahana amin'ny tendanao.
Indray androany dia 1 Oktobra taorian'ny zava-maharikoriko Greta (fanararaotan'ny ankizy) nandritra ny Firenena Mikambana
(ary mazava ho azy fa nisy fanodinkodinana toetr'andro nandritra ny am-polony taona, izay ihany koa ny zava-misy)
1 Oktobra 2019 ao amin'ny 19: 32
Tsy maintsy tohizana hatrany ny fampielezan-kevitra.
Ny fanolorana ao amin'ilay lahatsoratra dia mampiseho ny fomba fanodihan'ny IPCC ny angon-drakitra.
Ny ankamaroan'ny olona fotsiny dia tsy mandray ny olana mba hijery izany.
Manana feon-jaza misimisy kokoa amin'ny segondra 8 izahay
4 Oktobra 2019 ao amin'ny 05: 37
Mamirapiratra !!! hihinana zazakely izahay hamonjy ny toetr'andro!
Tovovavy: “Ny lanitra milatsaka andro vitsivitsy. Tsy maintsy hohaninay ny zaza. ”
AOC: “Eny, tsia, tsara izany. Fa mbola mihoatra ny volana vitsivitsy isika. "
4 Oktobra 2019 ao amin'ny 20: 49
Mpampiasa saram-bola be karama izay manosika ny "firaisana manerantany" ary amin'ny alàlan'ny fihetsehana piramida amin'ny faran'ny lahateny dia manambara ny script Luciferian.
Tsy misy olona maniry ny fahalotoana. Mila planeta salama avokoa ny rehetra, saingy eo amin'ny an-tampon'ireo orinasa ireo nahavanon-doza dia tsy maintsy mandoa vola ny vahoaka. Ny ankamaroan'ny sary maloto dia famokarana sarimihetsika fotsiny. Fa resaka olana, fanehoan-kevitra, vahaolana daholo.
Fleur nanoratra hoe:
8 Oktobra 2019 ao amin'ny 12: 42
Heveriko fa fikambanana miketrika izao tontolo izao dia fikambanana tsy mitongilana. Ny mpahay siansa manana fahitana hafa noho izany, izay tsy manaraka ny fivavahan'ny toetr'andro amin'ny andian'omby lehibe, dia tandindomin-doza ...
Manao ahoana ny aretina tianao?
Ilay Swindle mampanahy lehibe [NL Subs]
8 Oktobra 2019 ao amin'ny 13: 28
Misy ny mpahay siansa manohitra ny fikorianan-javatra ary manondro fa tsy hanafana ny hafanana amin'ny 2020 fa izao dia mangatsiaka be.
Izahay dia manantena vanimpotoana mini ...
Na ny NASA aza dia manambara fihenan'ny rivotra mahery.
Zavaboary, miposaka ny masoandro mahery ary manapotika ny lainga hitan'ny IPCC amin'ny taona ho avy amin'ny alàlan'ny fahamaizana ny tany .... lehibe!
Mba tsy ho voafitaka tanteraka, dia alaina ny IPCC ankehitriny amin'ny alàlan'ny fanaovana fanovana kely nefa manan-danja amin'ny fitaterany.
"Heibel ho an'ny IPCC"
8 Oktobra 2019 ao amin'ny 15: 26
Ny tsingerin-taona dia mihatra ary miseho isaky ny natiora sy eo amin'ny modely ara-toekarena, ny fihenan'ny mari-pana eto an-tany dia miaraka amin'ny hetsika solar (Sun point index). Mandehana ary hazavao ny salanisan'ny fihavoana salanisa. Tena manatona ny antsoina hoe Dalton faran'izay kely indrindra (2020) izahay ary arahin'i Maunder kely (vanim-potoanan'ny ranomandry kely), dia efa nitranga izany tamin'ny taonjato 18. Io modely io dia mamerina ny tenany ho toy ny tsingerin'ny voajanahary tokony ho fihetsika. Mazava ho azy fa afaka mahita azy ao amin'ny modely izay ampiasain'ny klioba ady rome izy ireo, izay tsy miverina afa-tsy 1850 ..
Misy ny tsiambaratelo miafina ao ambadiky ny hetra manerantany sy ny fampihenan'ny mponina.
« Ny mpitsikera Greta Thunberg dia mpivadika ara-pitondran-tena amin'ny tsy firaisana ara-pitondran-tena amin'ny tsy firaisana ara-pitondran-tena: famarana ny antony
Ny marika 'mety' ary ny paikady famaritana arahin'asa stigma »
Total visits: 13.163.181
Ny mpampihorohoro sainam-pirenena diso dia manafika an'i London, Manchester, Paris, Barcelona ary Rotterdam amin'ny 23 sy 24 Oktobra?
Ny PsyOp 'fanam-pinoana lalina' noho ny nanesoranao ny fahafahanao sy ny fampidirana 'polisy' eritreritra (part 3)
Ny PsyOp 'fanam-pinoana lalina' noho ny nanesoranao ny fahafahanao sy ny fampidirana 'polisy' eritreritra (part 2)
Martin Vrijland op Ny mpampihorohoro sainam-pirenena diso dia manafika an'i London, Manchester, Paris, Barcelona ary Rotterdam amin'ny 23 sy 24 Oktobra?
Camera 2 op Ny mpampihorohoro sainam-pirenena diso dia manafika an'i London, Manchester, Paris, Barcelona ary Rotterdam amin'ny 23 sy 24 Oktobra?
Mifandraisa anjara amin'ny 1.659 hafa